Wasiirada iyo xildhibaanada beelaha Hawiye oo isku raacay hal qodob oo adag - Caasimada Online
Home Warar Wasiirada iyo xildhibaanada beelaha Hawiye oo isku raacay hal qodob oo adag
Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaanada labada Gole ee baarlamanka iyo wasiirada ka soo jeeda Beesha Hawiye iyo guddoomiyaha maamulka gobalka Banaadir ayaa xalay kulan adag ku yeeshay magaalada Muqdisho.
Kulanka oo saacado badan qaatay ayaa dood dheer kadib la isku afgartay in hal qodob in aan marna laga tanaasulin halka hal qodob oo kalane ay gorgortan ka galaan.
Xubnahaan ayaa isku raacay in Hawiye oo kaliya ay yeeshaan xubnaha matalaya Gobalka Banaadir waxayna riyo ku tilmaameen in lagu qeybsado 4.5. Xog ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaysa in ay isku raaceen in aysan marna qaadan in Hawiye lala yeesho xubnaha matalaya gobalka Banaadir, marka laga reebo beelaha Banaadiriga.
Wararka aan helnay ayaa sheegaysa in mas’uuliyiintaan ay isla qaateen in marka hore ay lama taabtaan tahay in Hawiye oo kaliya yeesho kuraasta gobalka Banaadir iyo iney dalbadaan in tirada intaan laga badiyo lana geeyo ilaa 8 xubnood.